၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် အီး ကော မတ် စ် တိုးတက် မည်ဟု စင်ကာပူ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Sea ကတိပြု – Pandaily
Mar 02, 2022, 12:35ညနေ 2022/03/02 14:12:15 Pandaily
စင်ကာပူ ဂိမ်း နှင့် စားသုံးသူ အင်တာနက် ကုမ္ပဏီ Sea သည် လက်တင်အမေရိက ရှိ စီးပွားရေး တိုးချဲ့ လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း ၏နောက်ဆုံး ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာကို အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် အီး ကော မတ် စ် ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၈. ၉ ဘီလီယံမှ ၉. ၁ ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်လာ မည်၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၅. ၁ ဘီလီယံ ရှိခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကုမ္ပဏီ၏ ဂိမ်း ထုတ်ကုန် များသည် ၎င်း၏အဓိက စျေးကွက် ဖြစ်သော အိန္ဒိယ တွင် ခုခံ မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ သောကြောင့် Sea သည်၎င်း၏ ဂိမ်း ယူနစ် ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဒေါ်လာ ၄. ၆ ဘီလီယံမှ ၂၀ ၂၂ တွင်ဒေါ်လာ ၂. ၉ ဘီလီယံမှ ၃. ၁ ဘီလီယံ သို့ကျဆင်း လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
Sea ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး e-commerce Shopee ၊ အွန်လိုင်း ဂိမ်း Garena နှင့် Digital Finance SeaMoney တို့ဖြစ်သည်။ တ႐ုတ္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ ႀကီး Tencent က Sea တြင္ ရွယ္ယာ မ်ား ျဖတ္ေတာက္ ၿပီး မဲေပး ပိုင္ခြင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ သို႔ ေလွ်ာ့ခ် မည္ဟု ဇန္န၀ါရီ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Sea ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ် တွင်ဒေါ်လာ ၃. ၂ ဘီလီယံ သို့ နှစ် ဆတိုး ခဲ့ပြီး အသားတင် အရှုံး မှာဒေါ်လာ ၅ ၂၃. ၆ သန်းမှ ၆ ၁၇. ၆ သန်း အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။
Shopee ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ ေတြျဖစ္တဲ့ ထိုင္၀မ္ နဲ႔ ဘရာဇီး တို႔ကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို႔ Sea က ေျပာပါတယ္။ ပလက်ဖောင်း ၏စီးပွားရေး ပမာဏသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် ၈၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၁. ၆ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tencent သည် စင်ကာပူ နည်းပညာ အုပ်စု Sea တွင် ရှယ်ယာ လျှော့ချ မည်
ထို့အပြင် Sea သည် ဘရာဇီး ဈေးကွက်တွင် ၎င်း၏ ကန ဦး အောင်မြင်မှု ကို ခိုင်မာ အောင် ကြိုးစား နေသည်။ သည် ကုမဏီ ဟာ ပြည်တွင်းမှာ အွန်လိုင်း ရှော့ ပင်း လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ စတင် ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် Sea သည် လက်တင်အမေရိက e-commerce ကုမ္ပဏီကြီး Mercadoliber ၏အ ပြင်း အထ န် ယှဉ်ပြိုင်မှု နှင့် ရင်ဆိုင်နေရ သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Sea သည်၎င်း၏ ဘဏ္ services ာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဌာန ဖြစ်သော SeaMoney မှ ၀ င်ငွေအ တွက် ခန့်မှန်းချက် များပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည် ဒေါ်လာ ၁. ၁ ဘီလီယံမှ ၁. ၃ ဘီလီယံ ကြား ရှိသည်။
Tencent က Support Electric Producer Missfresh ဟာ ယခုအခါ Beijing Dong Platform ကို ရောက်ရှိနေပြီး
တရုတ်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ အခုလကစပြီး အွန်လိုင်းကနေ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချတာတွေကို Mssfresh Group of the Da Group ရဲ့ King Dong Long Ka-cha ကုမ္မဏီက ဝင်ရောက်ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tencent သည္ အေမရိကန္ရွယ္ယာ၀ယ္ယူမႈ ၁၁ သန္းေက်ာ္၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ၄ သန္းနီးပါးႏွင့္ ကုမၸဏီရွယ္ယာရယူမႈ ၁၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း
ဇူလိုင် ၁၃ ရက် ညနေပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ရောင်းချသူများနှင့် ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော အမေရိကန်မှ ကုမ္ပဏီကြီးများက Tencent သို့ စာရင်းသွင်းရန် သဘောတူညီ ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ထိုအချက်များအားလုံး မဖြစ်မနေ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။ အသားတင္အျမတ္မွာ ခန္႔မွန္းေျခ သန္း ၄၀၀ ေလာက္ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။
Industry Jul 14 ဇူလိုင် 14, 2021
Tencent Q2 ၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ၂၇၃၆ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာ
Tencent က ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ သူ႔ရဲ႕ စုစုေပါင္း၀င္ေငြဟာ ယြမ္ ၂၇၃၆ သန္း (ယြမ္ ၄၂၃ သန္း) အထိ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ အျမတ္ေငြမွာ ၄၂၈ ဒသမ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
Industry Aug 18 ဩဂုတ် 18, 2021
Tencent သည် စင်ကာပူ နည်းပညာ အုပ်စု Sea တွင် ရှယ်ယာ လျှော့ချ မည်
တရုတ် ဂိမ်း ကုမ္ပဏီကြီးTencentစင္ကာပူ ဂိမ္း နဲ႔ အီလက္ထ ေရာ နစ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ Sea Ltd ရဲ႕ ရွယ္ယာ ေတြကို ျဖတ္ေတာက္ ၿပီး မဲေပး ခြင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ ေလ်ာ့က် သြားမယ္လို႔ အဂၤါေန႔က ေျပာပါတယ္။
Industry Jan 05 ဇန်နဝါရီ 7, 2022